रियालिटी सो को झझल्को दिने अन्तरविद्यालय प्रत्योगिता “भ्वाइस अफ स्याट” हुदै ! – Gorkhali Voice
रियालिटी सो को झझल्को दिने अन्तरविद्यालय प्रत्योगिता “भ्वाइस अफ स्याट” हुदै !
२०७९, ७ असार मंगलवार २२:४५
असार७,काठमाडौं: भोली देखि निजी विद्यालयहरुको छाता सङ्गठन स्कुलस अलाइन्स फर एकेडेमिक टान्सफरमेसन (स्याट)ले विद्यालय स्तरिय गायन प्रतियोगिता “भ्वाइस अफ स्याट” गर्ने भएको छ। निजि विद्यालय भित्र हुने विभिन्न बिद्यालय स्तरिय प्रत्योगितालाई अन्तरविद्यालय प्रत्योगिता गर्दै आएको स्याटले यसबर्ष देखि भने रियालिटी सो को झझल्को दिने गरि कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ।
भ्वाइस अफ स्याटको अडिसन भने भोली अर्थात् असार ८ देखि तिन दिनसम्म हुने जनाइएको छ । स्कूल आफैले कार्यक्रम गर्दै अडिसनबाट उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरू चयन गर्नेछ । त्यसपछि टप २० राउन्डका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । श्रावण १४ मा हुने टप २० को छनोट प्रतियोगिता ब्रेनल्याण्ड एकेडेमीको हलमा हुनेछ । सो बाट छनोट भए पछि प्रतिस्पर्धिहरुले उपाधिका लागि भिड्नेछन् ।